Saldhigyo ay ciidamada Xabashidu ku leeyihiin Xudur oo la weeraray iyo Warar kale.
Wednesday November 24, 2021 - 11:01:53
Wararka ka imaanaya Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in markale weeraro culus lagu qaaday dhowr saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka DF-ka.
Xoogag jihaadi ah oo aad u hubaysan ayaa xalay weeraro safballaaran ah ku qaaday saldhig ciidamada Xabashida Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Xudur ee gobolka Bakool.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen hugunka rasaas ay labada dhinac isdhaafsanayeen, daqiiqado kadib ayuu weerar culus qabsaday saldhig ay maleeshiyaadka maamulka 'Koonfur Galbeed' ku lahaayeen isla degmada Xudur.
Sidoo kale iska hor'imaadyo culus ayaa degmada Waajid ku dhaxmaray ciidamada wilaayada Islaamiga Bakool iyo maleeshiyaad Amxaara halkaal ah balse lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalladii xalay Bakool ka dhacay.